Useqalile ngezinguquko kwiKZNA uMkasi osanda kuqokwa - Impempe
Useqalile ngezinguquko kwiKZNA uMkasi osanda kuqokwa
Umengameli omusha weKwaZulu-Natal Athletics (KZNA) uSteve Mkasi, oqokelwe kulesi sikhundla ngeviki elidlule useqalile ukusebenza njengoba eseveze ukuthi useqashe uDees Govender njengemenenja jikelele yale nhlangano.
I-KZNA ibigenabo ubuholi iminyaka emibili yonke kulandela ukuhlakazwa kwebhodi eyayengamelwe nguSello Mokoena kulandela izinsolo zokubgaphathi kahle.
UMkasi ubencintisana noKhura Buthelezi, Pat Hlongwane noSindy Ngema okhethweni lokwengameka le nhlangano eke yaba ngezinye eziphambili eNingizimu Afrika.
Bekunokungabaza ngokuthi uMkasi uzofika nethimba lakhe labaphathi, bese uGovender, onamava kulo msebenzi, achithwe.
Lesi yisikhundla esibalulekile kwazise osuke esiphethe nguye okumele aqinisekise ukuthi zonke izinhlelo zenzeka ngendlela efanele ukuze kuthuthuke ezokusubatha esifundazweni.
Bese kuneminyaka emibili engekho oqhoqhobele lesi sikhundla njengoba uGoodman Cele achithwa ngesikhathi kuhlakazwa ibhodi inhlangano yenganyelwa yisikhulu esasiqokwe yi-Athletics South Africa (ASA).
Khonamanjalo, uMkasi uthi ngeke besachitha sikhathi kodwa bazoqala umsebenzi wokubiyisela abasubathi ezinkundleni ngokusheshe.
“Asikho isikhathi sokusinisa amahleza, kumele sisebenze ngoba kunemicimbi emithathu ezayo, okuyiYouth and Juniors Track and Field neHalf Marathon Championships ezokwenzeka esikhathi esiyizinsuku ezingu-30.
“Yisimo esinzima kubaqoki lesi ngoba womabili anakhomishana, eyeTrack and Field neyeRoad Running baqoka kubasubathi ababodwa,” kusho uMkasi.
Previous Previous post: Usafuna ukuhlala kwiChiefs ‘uMadala’
Next Next post: Angabushiya ubuntofontofo boSuthu ayozixaka ngeBafana?